ဗိုင်းရပ်စ်လေလား ..ဟ၀ှါလား — MYSTERY ZILLION
April 2008 edited October 2009 in Antivirus & Virus
ကျွန်တော့စက်မှာ Kaspersky antivirus 7.0 တင်ထားပြီးသား windows defender လည်း သုံးထားတယ်... Ever Update ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်ကစပြီး စက်ကိုဖွင့်လိုက်လို့ ၀င်းဒိုးစ် တက်လာပြီးရင် ကီးဘုတ်က ဘယ်ခလုပ်မှ မနှိပ်ရဲတော့ဘူး နှိပ်မိတာနဲ့ ကီးဘုတ်ရော မောက်စ်ပါ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး.... အဲဒီလိုအခြေအနေမှာ System Unit က Reset ကိုနှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို Restart ချဖို့ကလွဲလို့ ဘာမှကို လုပ်စရာမရှိတော့တာပါ... အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရင်တော့ နောက်တကြိမ်မှာ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး အိုကေတွားတယ်... တခုပဲရှိတာက စက်ကို ပထမအကြိမ်ဖွင့် ... ပြီးရင် Mouse နဲ့ Restart ချ ၊ ပြီးတော့ နောက်တခေါက် ၀င်းဒိုးစ်တက်လာမှသုံး..
အဲဂလိုဖြစ်နေတာ ... :2: တော်တော် လေတယ်... ကြုံဖူးကြလား ... လက်နဲ့လိုက်သတ်လို့ရမလား.. :39:
ဗိုင်းရပ်ဆိုတာထက် registry injection တစ်ခုခုပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် ... registry cleaner တစ်ခုခုနဲ့ စမ်းကြည့်ပါလား။ ဒါမှမဟုတ် spyware remover တစ်ခုခုနဲ့စမ်းကြည့်ပါလားဗျ ...
ကွန်ပြူတာကိုကောင်းကောင်းသုံး လို ့ရနေတဲ့အချိန်မှာ start->Run->msconfig ကနေပြီးတော့
Services တွေ Startup တွေ ရပ်ထားပြီးသုံးရင်ကော? လိုတဲ့အခါပြန် run လို ့ရတာပဲ...
အဲဒါတွေရပ်ထားတော့ ဘာမှန်းညာမှန်း မသိတဲ့ ကောင်တွေပါရပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့..
အရမ်းဆိုးနေရင်တော့ စက်ဖွင့်ဖွင့်ချင်း (Ctrl+Alt+Del ) Task Manager ရဲ ့process ထဲကနေ
explorer.exe ကိုအမြန်သတ်ပြီး မှ New Task->Run ကနေ explorer.exe ကိုပြန် run ပေါ့..
အကောင်ပလောင်တွေကိုတော့ လက်နဲ ့လိုက်ပြီး လည်ပင်းညှစ်(Delete) လိုက်လုပ်ပေါ့..
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ ့ကွန်ပြူတာတုန်း က စက်ဖွင့်ဖွင့် ခြင်း IE တွေ ၂၀၀ လောက်တက်တာ Memory ကုန်မှပဲရပ်တော့တယ်..စက်လည်းမျက်လုံးပြူး လျှာထွက်ပြီး မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တုန်းက
စက်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း Task Manager ကိုအမြန်ခေါ်ပြီး လုပ်ကြည့်ဘူးလို ့ပါ.....
johnboylay wrote: »
မရဘူး Ctrl+Alt+Del ကတော့ ပြောမနေနဲ့ ကီးဘုတ်က ဘာခလုတ်ကိုမှ အနှိပ်မခံတာ နှိပ်တာနဲ့ ရပ်သွားတာပဲ :68: မလွယ်ပါဘူး ... အဲဒီအကောင်ကို အခု ဖမ်းဖို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မွေးထားပြီးတော့ ရှာနေတယ်... သိရင်တော့ ပြောပြကြအုံးဗျ...
Windows မတက်ခင် F8 key ကို နှိပ်ပြီး Safe Mode ထဲကို၀င်ပြီး
msconfig ကို Setting ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား....
မရပါ ကီးဘုတ်ကို နှိပ်လို့မရတာပါ msconfig က Start up အားလုံးကို ပိတ်ထားပြီးပါပြီ
မရပါ ဆိုမှ မရပါ... နှစ်ခါ ဖွင့်နေရပါသည်....:D:D
Windows စတက် တဲ့အချိန်တောင်မှ ကီးဘုတ် နှိပ်မရဘူး ဆိုတော့ ....ကီးဘုတ်က အကောင်းကြီးဆိုရင်တော့ နဲနဲထူးဆန်းတယ်.....
လုံး၀စိတ်မရှည်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ၀င်းဒိုး သာ ပြန်တင်လိုက်တော့ဗျာ...
လူအင်အားလိုရင် ပြောဗျာ...လေး ငါး ယောက်လောက် ၀ိုင်းတင်ကြတာပေါ့..:D
April 2008 edited April 2008 Administrators
keyboard ပျက်နေတယ်ထင်တယ်.. လဲကြည့်လိုက်ပါလား...
အဟင့် ... (
စိတ်က ရှည်ပါတယ်... ရှည်ပါတယ်..
ဘာကောင်လဲဆိုတာမသိရမချင်း ရှာအုံးမှာ... :68:
မီးတိုက်ကြည့်ပါလား စက်ကို ... ပူရင်ဒီကောင်ထွက်လာမှာပေါ့နော့ :2:
April 2008 edited April 2008 Moderators
keyboard ရှော့ကျနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်...
မိပြီကွ... ဘယ်ရမလဲ ... MZ ၀ိုင်းတော်သားပဲ... )
registry မှာ တွေ့ပြီ...
c:\_windows\_system32\_explorcr.exe က အရင်၀င်ထားတာ .. အဲဒီအကလောင်ကို ကက်စပါနဲ့ သမလိုက်တော့ တေတွားရော... ဒါပေမယ့် Registry က Run မှာ ဒင်းက ၀င်းဒိုးတက်တက်ချင်း run အောင်ရေးထားတာ.. အဲဒါကြောင့် စက်တက်ရင် အဲဂလိုဖြစ်ဖြစ်ပြီး မိနေတာ ... ခုတော့ အနော်တိတွားပြီ အဲဒီမှာ တွားဖျက် ရီစတက်တခါချလိုက်ခါမှ ကိုယ်တော်ချောက ရှောဘရားသားကြွသွားလေတော့သတည်း.... သာဓု .. သာဓု ... သာဓု
it's just suggestion n i won't say that this way willbok...!
# boot withaCD such as Winternal etc...
# explore the registry strings and fix them
# change and edit the msconfig
(the best way is2make the system restore if u hav restore point)
ထူးဆန်းထွေလာ ပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော့် ဘော်ဘော်တစ်ယောက် စက်မှာ c: d: drive ကိိုdouble click လုပ်တာနဲ့ restart shutdown ကျနေသလိုပေါ့ အဲ သူကတော့ virus မဟုတ်ဘူူး dirve autorun မှာ၀င်ကလိထားတာ
window live CD နဲ. ရင် window တက်ပြီး စမ်းကြည်.ပ လားဗျ
:d စီခရေဇီ :d